Fiovana ao amin’ny birao filankevi-pitantanan’ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Fanaovan-gazety, ny fisoloam-bava ary ny asa soa no nataon'i Akwe Amosu, mpikambana vaovao ao amin'ny birao.
Voadika ny 26 Desambra 2021 3:22 GMT
Vakio amin'ny teny English, Italiano, Français, Ελληνικά, English
Efa niasa tao amin'ny biraon'ny Global Voices i Akwe tamin'ny taona 2008-2012. (Sary avy amin'i Akwe Amosu)
Faly ny Global Voices manambara fa nanatevin-daharana ny filankevi-pitantanana tamin'ny volana Novambra i Akwe Amosu.
Manodidina ny asa fanaovan-gazety, ny fisoloana vava ary ny fanaovana asa soa ny asa ataon'i Akwe. Amin'izao fotoana izao izy no talen'ny fandaharan’asa ao amin'ny Fikaonan-doha momba ny hery sy ny firaisankina ho an'ny zon'olombelona. Teo aloha izy niasa ho tompon’andraikitra tao amin'ny Open Society Foundations (OSF), taorian'ny naha Talem-paritry ny faritra ho an'i Afrika sy Talen'ny Fiarovana ny zo any Afrika azy.
Nanomboka ny asany tamin'ny asa fanaovan-gazety Afrikana i Akwe, nifindra tany amin'ny Financial Times, ary taty aoriana tao amin'ny BBC World Service, izay namoahany sy nampiantranoany fandaharana mivantana momba ny vaovao sy ny programam-draharaha ankehitriny ho an'ny mpihaino manerana an'i Afrika miisa 18 tapitrisa. Niala tao amin'ny BBC izy mba hanatevin-daharana ny ekipa mpanangana ny tranokalam-baovao allAfrica.com, ary lasa lehiben'ny fifandraisana tao amin'ny Vaomieran'ny Toekarenan'ny Firenena Mikambana ho an'i Afrika any Addis Abeba izy taty aoriana talohan'ny nidirany tao amin'ny OSF Washington, DC. Efa niasa tao amin'ny birao filankevi-pitantanan'ny Global Voices izy tamin'ny taona 2008-2012.
Tamin'ny volana Novambra, nanao veloma an’i James Deane ihany koa ny birao amin'ny fahataperan'ny fe-potoam-piasany. Nanatevin-daharana tao amin'ny biraon'ny Global Voices i James tamin'ny taona 2015 ary nitana ny andraikitry ny filohan'ny filankevi-pitantanana tamin'ny taona 2019. I Mary Kay Magistad no nanolo ny toerany izay nanatevin-daharana tao amin'ny birao tamin'ny taona 2019.